Kulanka Farmaajjo iyo Biixi maxaa xilligaan kusoo beegay? - Tilmaan Media
Kulanka Farmaajjo iyo Biixi maxaa xilligaan kusoo beegay?
Sida lawada ogsoon yahay labada dhinacna sheegeen, waxaa lagu wadaa inuu dhaco kulan udhaxeeya madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ay kala hogaaminayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi.
Kulankan ayaa imaanaya xilli Waddanku marayo xaalado xasaasiya, sida; doorashada oo ay ka harsantahay wax kayar 7bilood, xiriirka udhexeeya Maamul Gobaleedyada iyo Dawalladda Federalka oo aan wanaagsanayn, culays dhaqaale oo ay waliba usiidheertahay Cudurka Corvid-19, iyo waliba madaxda sare ee Dawlladda oo uu kadhex jiro loollan siyaasadeed oo kusalaysan sidii midkaste uu asagu isaga dhigilahaa qofka libinta wax qabad ee Dawladda uu dhaliyay, sidaasna taageero iyo sumcad dhanka dadwaynaha ah u helo.
Intaas oo xaaladood ayada oo ay jirto, ayaa su’aashu tahay maxaa xiligaan keenay in kulankaas la qorsheeyo inuu dhaco oo walibana kaaga siidarane uu kadhacayo Djibouti oo mudaharaadyo looga soo horjeedo Ismaaciil Cumar Geelle ay kataagan yihiin iyo waliba asagoo kujira jahwareer siyaasadeed iyo nacaybka loo qabo oo sii xoogaysanaya.
Saddex qodob baa laga fahimi karaa arimahaas kor ku xusan.
Maadaama madaxwayne Farmaajo uu wajahayo culuyso siyaasadeed oo dhanka gudaha ah, oo ay ugu horayso doorashada hadalkeedu aadka ubatay uuna aad ugu dadaalayo markale inuu helo kalsoonida dadka wax dooran doona; ayaa uu rabaa arrintan in uu kadhigto mid uu dadka kaga jeediyo culayska Gudaha kahaysta, kagana dhigi doono qaybta ugu muhiimsan ee dhalotuska siyaasadaysan ee larabo in lagusoo bandhigo maalmaha xorriyadda ee nagu soo aadan.
In uu meesha kasaaro su’aasha ah maxaa loojoojiyey Wada-hadalkii usocday Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Iyo in is-fahan hoose lagaaro, sida is bahaysi siyaasadeed oo ah in Madaxda Soomaaliland laga tala siiyo dadka uga midnoqonaya DFS.
Arimahaas waxaa aad u riixaya Raysal-wasaaraha Itoobiya oo matalaya inuu yahay nabaddoonka iyo isukeenaha Wadamada Geeska Afrika dhaca.
Arrinta kale oo ayadana muhiimka ah waxaytahay, in Abiya Axmed laftigiisa ay haystaan culays siyaasadeed oo awoodi kari la’yahay xasilinta iyo wadajirka Qawmiyadaha Itoobiya, qaarkood ay qarka usaaran yihiin inayba kabaxaan Wadanka Itoobiya intiisa kale.
Arimahaas oo dhan, waxay qayb ka noqonayaan hawlihii socoday . sida, isdhexgalkii Geeska Afrika oo ayadana su’aalo badan kataagnaayeen oo ah sidee Hogaamiya yaal xallin kari la’ xaaladaha kataagan Waddamadoodda gudahooda in ay kashaqeeyaan oo hadba meel kushiraan ayagoo ka arrinsanaya isu keenidda dad aan haysan xasilooni dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo aminaga iyo walibana ay kala dhex taalo taariikh kusalaysan kala shaki iyo is aaminaad darro.
Ugu dabayn, waxaa iskacad in uusan xiisabadan lahayn kulankaas maadaama natiijada kasoo bixidoonta aysan waxbadan kaduwanaan doonin kulamadii hadda kahor dhacay. Waxaa intaas siidheer, in uu marhoraba taageero badan ka haysan labada dhinac haddii ay ahaan lahayd dhanka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Maxaa yeelay, labada masuul midkoodna kuma dhiiran karo in uu go’aan kagaaro arimaha xasaasiga ah oo salka u ah doonista midkasta u gaarka ah.
W/Q: Cabdullahi Maxamed
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo gaaray Jabuuti
Madaxweyne Farmaajo oo casumaad u diray madaxda maamul goboleedyada